7 Ezona ndawo zifikelelekayo zokuhamba eYurophu | Gcina A Isitimela
ekhaya > Travel Europe > 7 Ezona ndawo zifikelelekayo zokuhamba eYurophu
Uhambo loLoliwe, Qeqesha ukuhamba iOstriya, Uloliwe wokuhamba eBelgium, Train Travel Czech Republic, Qeqesha uhambo eFrance, Qeqesha uhambo eJamani, Qeqesha uHambo lwaseHungary, Uloliwe kuhambo Italy, Travel Europe
(Wagqibela ukuhlaziywa nge-: 24/10/2020)
Ezinye zeembono ezintle eYurophu zixabiso kwaye kulula ukufikelela kuzo. Na lyo line, a trip to Europe can get quite expensive if you don’t plan in advance. While most European capitals will stretch your travel budget, Kukho iindawo ezimbalwa zokuhamba eYurophu ezifikelelekayo ngokupheleleyo. Phezulu kwethu 7 Ezona ndawo zifikelelekayo zokuhamba eYurophu zilungele uhlahlo-lwabiwo mali kwaye aziyi kudlula kwi-50 yeerandi ngosuku umntu ngamnye.
Ezi zinto zifihliweyo aziweli mva kubuhle nakumlingo, kwaza kwalandela izixeko ezinjengeParis neBerlin.
1. Ezona ndawo zibiza kakhulu eYurophu: Cologne, Jemani
Ngelixa iJamani ibiza kakhulu, I-Cologne yenye yezona ndawo zifikelelekayo ukutyelela eYurophu. Ukusuka kwindawo yokuhlala ehambelana nohlahlo-lwabiwo mali ukuya kwiimpawu zembonakalo yasimahla kunye nokuhamba ngexabiso eliphantsi, Cologne ngokuqinisekileyo a ukuqhekeka okukhulu kwedolophu ukhetho ukuba uhamba wedwa okanye ucwangcisa uhambo lwe-Euro yosapho.
Esi sixeko saseJamani likhaya lebhiya laseKolsch, ke unokungcamla izidlo ezimnandi zaseJamani nge-X 1.30 kuphela. Akukho nto intle njengokuzonwabisa ngeponti kunxweme loMlambo iRhein entle, emva kosuku esixekweni. Qiniseka ukuba uhamba ngeFicshmarkt yokufumana iifoto zeposi kunye nezindlu ezimibalabala kwaye uqhubeke uye kwi-Old Town, Altstadt.
Ukwengeza, indawo eyaziwayo kakhulu eJamani, icologne emangalisayo yaseCologne ikhululekile ukutyelelwa. Uyilo lwayo lweGothic, zipeyintwe ngeefestile zeglasi, kwaye iimbono zomlambo zi-epic. Ukuba uyabuthanda ubugcisa, emva koko iCologne inayo iimyuziyam ezinkulu okanye umdla wobugcisa basesitratweni Ehrenfeld. Lo mmandla uyindawo ye-hip kunye nefashoni yeCologne, indawo yokuya kwindawo yekhofi kunye nevini.
Njengoko ubona iCologne sisixeko esimangalisayo sohlahlo-lwabiwo mali lokuya eYurophu. Ngaphezu koko, eyona nto ilungileyo ngayo kukuhamba kwayo ngokufanelekileyo nangokufikelelekayo. Izithuthi zaseJamani, iziporo zikaloliwe, kunye netram zikhululekile kakhulu kwaye zisebenza ngokufanelekileyo, iyakusindisa ixesha elininzi xa ujikeleza. Ukufumana ukupasa uloliwe mihla le okanye ngeveki yindlela elungileyo wonge imali xa useluhambeni.
IBerlin ukuya kwiAachen Qeqesha Amaxabiso
IFrankfurt ukuya eCologne Amaxabiso oololiwe
Dresden ukuya eCologne Amaxabiso oLoliwe
Aachen ukuya eCologne Amaxabiso oLoliwe
2. wasebenzisa, Bheljiyam
Waffles isidlo sakusasa kwaye ukulungele ukuphonononga konke 80 iibhlorho kunye nechibi lothando, Amanzi amancinci. Ukuqhekeza ngu Idolophu entle yamaxesha aphakathi eBelgium kunye neyona ndawo ifikelelekayo ukutyelela eYurophu. Ukusuka kwinani elibalaseleyo leenqaba ukuya ku ukukhwela iphenyane kwimijelo, zininzi izinto ezifikelelekayo onokuzenza eBruges, ukukhwela uloliwe ukusuka eBrussels.
Ukuba unqwenela ukujija kancinci, ngokuqinisekileyo kuya kufuneka uchithe ixesha kunye nenxalenye yebhajethi yakho yemihla ngemihla kwitshokholethi. Khangela uphawu 'olwenziwe ngezandla' 50 ye iivenkile zetshokholethi esixekweni ngeyona chocolate ibalaseleyo yaseBelgium.
Ubungakanani obuncinci beBruges kunye nokucwangciswa kwesixeko kulula kakhulu ukuphononongwa ngeenyawo, ke akufuneki uchithe ixesha kwezothutho. Inyaniso, indlela entle yokujonga isixeko kwaye ufunde ngenkcubeko kunye nelifa lemveli ngokujoyina ukhenketho lokuhamba simahla. Ngale ndlela unokufumana zonke iingcebiso zangaphakathi kwiivenkile ezifikelelekayo, uyokukhumbula, kunye neyona ndlela yokundwendwela eyona miba iphambili.
IAmsterdam ukuya eBruges Qeqesha amaXabiso
IBrussels ukuya eBruges Qeqesha amaXabiso
Antwerp ukuya eBruges Qeqesha amaxabiso
IGhent ukuya eBruges Qeqesha amaxabiso
3. Ezona ndawo zibiza kakhulu eYurophu: I-Czech Krumlov, Umphakathi waseCzech
IRiphabhlikhi yaseCzech yenye yezona ndawo zifikelelekayo zokuhamba eYurophu, yiyo ke loo nto idolophu entle yaseCesky Krumlov ikuluhlu lwethu. Le dolophu inemibala iyabonwabisa abakhenkethi kwaye ngaphezulu kwako konke, Ulwabiwo-mali. Uyakufumanisa kulula kakhulu ukuphonononga kunye nokuzonwabisa ngokutya kwaseCzech, idrafti yebhiya, kunye nokubona indawo ngelixa ungasebenzisi nto kwaphela kuhlahlo-lwabiwo mali lokuhamba.
Okokuqala, Ukutyela ngaphandle kubiza kakhulu, kwaye unokufumana iimenyu ezinkulu zasemini ezinikezela nge-starter, owona nobangela, kunye nobhiya ngamaxabiso ahlekisayo. Ibhiya yexabiso eliphantsi kunamanzi kuyo yonke iRiphabhlikhi yaseCzech kwaye iyayidibanisa neesoseji ezidumileyo, uzifumanele isidlo sangokuhlwa esimnandi.
Isixeko sisekhaya kwiinqaba ezimangalisayo kunye neegadi ezisimahla ukutyelela, kwaye ukuba unqwenela ukunyuka ujonge umbono we-epic, ke imali yokungena kwinqaba ingaphantsi 5 euro. Olunye ukhetho olukhulu lokuhlola isixeko kukujoyina uhambo lokuhamba simahla kwaye udibane nabanye abahambi okanye ubhukishe a ICesky Krumlov yabucala isixeko ukuhamba uhambo yeqela lemigulukudu. Ngale ndlela unokufumana iimfihlo zedolophu, iintsomi, kunye neengcebiso zokuba nohambo olumangalisayo kumhlaba weentsomi.
ENuremberg ukuya ePrague Amaxabiso oololiwe
EMunich ukuya ePrague amaXabiso oLoliwe
IBerlin ukuya ePrague Amaxabiso oQeqesho
IVienna ukuya ePrague Amaxabiso oololiwe
4. Eger, Hangari
IHungary lelinye lawona mazwe anexabiso eliphantsi eYurophu, kwaye kuninzi okunokubonwa kuneBudapest. UEger sisixeko esihle, ngemithombo eshushu, Bukk Hungary ’ Ipaki yelizwe, kunye neempawu ezintle zokundwendwela. Zonke ezi zinto zimangalisayo ziyafumaneka ngaphandle kokulalanisa kuhlahlo-lwabiwo mali lwakho.
I-Eger yenye yeedolophu ezidumileyo zaseHungary kwaye likhaya lewayini ebomvu emnandi, imi phakathi kweentaba zeBukk. Iimbono ezintle izimvo zendalo zenza useto olugqibeleleyo lwe- iwayini zokuhlolwa emva kosuku olukhulu lokuhamba intaba kwipaki entle yaseBukk kunye nokuphumla kwimithombo yendalo. Njengoko iHungary ilikhaya lemithombo efanelekileyo yendalo eYurophu, Ukucwina kwi-thermals kunyanzelekile.
I-Eger ilungile ngeempelaveki yokuphumla e-Budapest. Ukhetho phakathi kohambo losuku okanye ikhefu lesixeko elivela eBudapest lelakho lonke, kodwa sicebisa ukuchitha ubuncinci impelaveki ende kwesi sixeko sithandekayo.
IVienna ukuya kumaBudapest amaXabiso oLoliwe
Prague ukuya eBudapest Amaxabiso oololiwe
EMunich ukuya eBudapest amaXabiso oLoliwe
IGraz ukuya eBudapest Amaxabiso oololiwe
5. Ezona ndawo zibiza kakhulu eYurophu: Cinque Terre, ElamaTaliyane
Izindlu ezinemibala eqaqambileyo, ndihleli ecaleni kweSentiero Azzurro entle, Yenza iCinque Terre isimangaliso sokwakha sase-Italiya. ICinque Terre yenye yezona ndawo zifikelelekayo zokuhamba eYurophu nase-Itali. Akukho nto ithelekiswa nemvakalelo yokuhamba kakuhle nangokukhawuleza phakathi 5 amabala amangalisayo. Le ndlela yokuhamba ikongela ixesha elininzi kunye nemali kunye nekhadi loololiwe laseCinque Terre.
Ngokumalunga nendawo yokuhlala, ukwenza iLa Spezia isiseko sakho sohambo lukhetho olukhulu. Sisixeko esihle sase-Itali esinezibuko kunye neehostele ezininzi kunye neehotele onokukhetha kuzo.
Cinque Terre Uhlala exakekile kwaye ebiza kakhulu ngexesha eliphezulu. ngoko ke, Kungcono ukutyelela phakathi kuka-Epreli-Juni ngehlobo okanye ngo-Okthobha-Novemba ukuze uncome ubuhle bayo bendalo ekwindla.
La Spezia ukuya eRiomaggiore Amaxabiso oQeqesho
UFlorence waya eRiomaggiore amaXabiso oQeqesho
Modena ukuya eRiomaggiore Amaxabiso oQeqesho
ILivorno ukuya eRiomaggiore Amaxabiso oQeqesho
6. Vienna, Ostriya
Ikhaya ukuya eMozart, Uyilo lweBaroque, Schonbrunn Palace, kunye nombala oluhlaza, IVienna ingokobuthixo. Ngelixa abanye benokuthi lixabiso, Uhambo oluya kwikomkhulu lase-Austrian luyenzeka ngokupheleleyo kwaye aluyi kuwa kude nohlahlo-lwabiwo mali lokuhamba lwemihla ngemihla kwamanye amazwe aseYurophu anjengePrague okanye iBudapest. Isixeko siyabamkela abakhenkethi, ke unokuyithanda inkcubeko etyebileyo, kwase, kunye nomtsalane wobomi baseViennese, ngaphandle kokubeka esichengeni ukonga kwakho ubomi.
Idolophu enkulu yase-Austrian yenye yezona ndawo zifikelelekayo zokundwendwela eYurophu, Enkosi ngezivumelwano zayo ezithandekayo kubakhenkethi. Umzekelo, iKhadi laseVienna liya kukufumanela izaphulelo kwiimyuziyam, iindawo ezinika umdla zotyelelo, yaye izithuthi zikawonke wonke. Ukwengeza, ungangcamla eyona strudel yaseViennese kwezinye zeendawo zokutyela ezimangalisayo zaseVienna, ngexesha lesidlo sasemini. Iindawo zokutyela ezininzi kunye neefestile zibonelela nge 2-3 Imenyu yokuseta ikhosi engaphantsi kwe- € 10.
Ngobusuku ngaphandle kwenkcubeko kunye nomculo, Iivenkile ezininzi zinemidlalo yomculo yasimahla. kodwa, ukuba ujonge ubusuku kwiopera odumileyo, ke kuya kufuneka unamehlo akho ekufumaneni amatikiti ekusebenzeni okumileyo, njengoko zitshiphu kakhulu kunetikiti lokudlala le-opera.
7. Ezona ndawo zibiza kakhulu eYurophu: eNormandy, Fransi
Unxweme lwegolide, Iintsomi zikaJoan waseArc waseRuen, Isiqithi saseMont St. Imonki yoonongendi, bambalwa kuphela kwiigugu eNormandy. Lo mmandla uthandekayo luhambo lweeyure ezimbini ukusuka eParis, kodwa ngokungafaniyo nekomkhulu laseFrance, yenye yezona ndawo zifikelelekayo zokuhamba eFrance.
I-Normandy yaziwa kakhulu ngeelwandle zokufika ezivela kwi-WWII. kunjalo, likhaya kumawa e-Etretat, yamatye amakhulu ekalika, ummangaliso wendalo omangalisayo. Ilali yaseSiver Giverny apho uClaude Monet ahlala khona kunye nokupeyinta iinyibiba ezidumileyo yenye indawo ongaphoswa yiyo uhambo oluya eNormandy.
Ukushwankathela, Ukuhamba eYurophu kunokuba yinto efikelelekayo kakhulu. eNormandy, Cinque Terre, Vienna, Eger, wasebenzisa, Cologne, kunye noCesky Krumlov, are 7 Iindawo ezinokufikeleleka zokuhamba eYurophu. Iingcebiso zethu ziya kukugcina ekusebenziseni ukonga ubomi bakho kwiholide enye kwaye uqinisekise ukuba unohambo olukhunjulwayo nolukhethekileyo.
EParis ukuya eRouen Amaxabiso oLoliwe
EParis ukuya kumaxabiso oLille oLoliwe
Rouen ukuya eBrest amaXabiso oLoliwe
Rouen ukuya kwiLe Havre Amaxabiso oLoliwe
Apha Gcina A Isitimela, we will be happy to help you plan your vacation to the most affordable places in Europe by train.
Ngaba ufuna ukufaka i-post yethu yeblogi "7 zeZona ndawo zifikelelekayo zokuHamba eYurophu" kwindawo yakho? Ungakhetha noba inanilethu iifoto kwaye okubhaliweyo kwaye asiphe credit kunye unxulumaniso kwesi hetalia us. Okanye nqakraza apha: https://embed.ly/code?url =I-https://www.saveatrain.com/blog/most-affordable-places-europe/ ‎- (Skrolela phantsi kancinci ukuze ubone Code lungisela)
Ukuba ufuna ukuba nobubele kubasebenzisi bakho, wena ndiyabakhokela ngqo amaphepha ukufuna yethu. Kule ikhonkco, uzakufumana iindlela zethu ezithandwa kakhulu kuloliwe - https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Ngaphakathi une link yethu ngenxa IsiNgesi emakhasini, kodwa nathi sibe https://www.saveatrain.com/ja_routes_sitemap.xml, kwaye bangatshintsha iilwimi / ja ukuba / fr okanye / de yaye ngaphezulu.
Ukuqeqesha Versus Ibhasi Aseyurophu
intsha uloliwe, Qeqesha ukuhamba iBritane, Qeqesha uhambo eFrance, Qeqesha uhambo eJamani, Iingcebiso zokuhamba, Travel Europe